Mara obodo mara mma kachasị mma na Alicante | Akụkọ Njem
Ọ bụrụ na anyị na-agwa gị banyere Mpaghara Alicante ị na-eche maka obodo ya, na Castle nke Santa Bárbara, na Benidorm na karịa ihe niile dị na oke osimiri. Mana Alicante kariri, n'ihi na o nwere obere obodo mara mma anyi kwesiri ichoputa. Ọtụtụ n'ime ha nwere ihe ncheta akụkọ ihe mere eme na ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọpụta ezigbo ndụ.
Na Alicante anyị nwere ike ịchọta site na obodo ndị a na-ahụkarị n'oké osimiri nke si na azụ, ndị ọzọ na-ahụkarị n'ime ime ụlọ iji chọpụta ụfọdụ ụlọ ndị na-egosi ụzọ ndị Alakụba na akụkọ ihe mere eme Spanish. Ndị njem Alicante na-emepe ebe ndị a iji chọpụta ọtụtụ ala a. Chọpụta obodo kachasị mma na Alicante.
4 Ihe kacha mma
5 Osisi ndị agha mmiri
Anyị na-amalite na otu n'ime obodo ndị mara mma na ndị njem na Alicante, nke dị kpọmkwem n'ụsọ Oké Osimiri Mediterenian. Ọ dị n'akụkụ Sierra de Bernia na Costa Blanca na-eme njem nleta a ma ama. Na Altea, ụlọ ya ndị ọcha na-apụta, nke na-emepụta foto dị nnọọ na Mediterranean. Gagharị n'okporo ámá nke obodo ochie ahụ bụ ihe obi ụtọ na ịkwesighi ịhapụ ụka nke Nuestra Señora del Consuelo, nke na-apụ apụ maka ụlọ ya na-acha anụnụ anụnụ na ọnọdụ ya n'elu. N'ime obodo enwere ebe ndị ọzọ ị ga-ahụ, dịka Torre de la Galera, ụlọ obibi ndị mọnk nke Carmelitas Descalzas ma ọ bụ Torre de Bellaguarda.
Na Denia anyị nwere obodo ọzọ nke bụkwa otu n'ime ndị kasị njegharị, n'ihi na ọnụ ọgụgụ nke coves na mma osimiri nwere. Ọ dị na Costa Blanca, n’ebe ugwu Alicante. Mgbe etolitere, ọ bụ karịa obodo ma dị na Ogige Nganga nke Montgó. O nwere ihe nketa magburu onwe ya nke a na-ekwesịghị ịhapụ, dịka nnukwu ụlọ ya, nke nwere ọtụtụ ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie, ebe obibi ndị Nwaanyị nke Nwanyị anyị nke Loreto ma ọ bụ Hermitage nke San Juan. Banyere osimiri, anyị ga-enwe ụfọdụ ịhọrọ site na ha, dịka Les Marines ma ọ bụ La Marineta Casiana.
Emi odude ke ikpehe Marina Alta, dị ka Denia, ọ bụ obodo ọzọ dị n'ụsọ oké osimiri nke mara mma nlegharị anya iji chọpụta. Obere jụụ karịa Denia maka ndị chọrọ obere ezumike ezumike. Ọ bụkwa obodo nwere oke osimiri mara mma ma mara mma ikpori ndụ ekpomoku ma di nso Montgó Natural Park. Offọdụ ihe enwere ike ileta bụ Churchka nke Nwanyị Nwanyị nke Loreto, theka San Bartolomé ma ọ bụ ebe obibi ndị mọnk nke Virgin nke ndị mmụọ ozi.
Anyị na-aga ugbu a n'ime ime, gaa n'obodo dị iche na Alicante. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị njem na-elekwasị anya n'ụsọ oké osimiri, anyị nwere ike ịchọta ụfọdụ obodo ndị dị n'ime ime obodo na-adọrọ adọrọ, dị ka Guadalest. Ọ dị na mpaghara Marina Baja ma kwupụta ya Mgbanwe nke Historical-Artistic, ya mere ihe nketa gị na-akpachara anya. N'obodo a na ndagwurugwu Guadalest anyị nwere ike ịhụ Castillo de la Alcozaiba, Castillo de San José, Casa Orduña ma ọ bụ ụlọ mkpọrọ nke narị afọ nke iri na abụọ.
Osisi ndị agha mmiri
Ọ bụrụ na anyị gaa Guadalest, anyị nwekwara ike ịgafe Polop de la Marina, nke dị nso. Dị ka ọtụtụ obodo ndị dị na Alicante, o nwere nnukwu ụlọ na mpaghara ya kachasị elu, maka ebumnuche nchebe. N'okporo ámá ya ka ị ga-ahụ Isi iyi nke Jets, nke bu akara nke obodo. To ga-aga na Gabriel Miró House Museum, nke bụkwa ọfịs ndị njem, ebe ndị isi obodo ahụ nwetara ya. Ihe ndị ọzọ nwere mmasị bụ mgbidi ochie, ụlọ ụka San Pedro ma ọ bụ ebe nsọ nke Divine Aurora.
Anyị na-alaghachi n'ụsọ oké osimiri iji nwee obi ụtọ Calpe, ebe ị nwere ike nwee ekele maka Peñón de Ifach. Obodo a nwekwara ụlọ nke ya na obodo ochie echekwara nke ọma. Echefula ezigbo bat na 'Baths of Moorish Queen', ebe a na-egwu akwụkwọ na-agba akwụkwọ n'ime nkume nke na-enye ụdị ọdọ mmiri nke mmiri mmiri na-abanye ozugbo. Dị ka ebe ndị ọzọ n'ụsọ oké osimiri, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ n'etiti osimiri dị iche iche na coves.
Ndị a bụ ntọala dị iche iche dị na mpaghara Marina Alta. Teulada dị n’ime ime na Moraira n’ụsọ oké osimiri. Enwere ọtụtụ ihe enwere ike ịga leta n’obodo ndị a. Churchlọ mgbidi nke Santa Catalina tinyere mgbidi ya chebere ụmụ amaala na mwakpo ahụ. N'ime obodo mepere emepe nke Moraira bụ XIX narị afọ parish parish nke Nuestra Señora de los Desamparados. Dlọ Nche Cap D'Or bụ ụlọ elu nkume siri ike na-enweghị ọnụ ụzọ mbata. N’akụkụ ụlọ elu a ka Cova de la Cendra dị, otu ebe dị mkpa ihe mgbe ochie sitere na Upper Palaeolithic. Ikwesighi ịhapụ Moraira Castle na narị afọ nke XNUMX ma ọ bụ ụsọ osimiri ya dị ebube, n'etiti Playa del Portel ma ọ bụ Cala Portitxol.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Alicante » Mara obodo ndị mara mma na Alicante
Ihe ị ga-ahụ na Ávila n'otu ụbọchị
Laguna Negra, ebe ndịda Argentina